Ciidamo Katirsan DF-ka oo Dad Shacab Ah Ku Dilay Magaalooyinka Muqdisho iyo Beled Weyne.
Tuesday February 21, 2017 - 09:40:42 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaad Hubeysan oo loo maleynayo in ay katirsanyihiin dowladda Federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay Suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in askari ku hubeysan qoriga AK47 ah uu nin ganacsade ah ka dalbay in uu siiyo Mobile uu watay kadib markii uu ka dhega adeygayna askariga ayaa rasaas ku sharnaqay qofka shacabka ah oo isla goobta ku naf baxay.
Askariga dilka geystay oo ay la socdeen laba Askari ayaa goobta si nabad gelya ah uga dhaqaaqay, wararka ayaa intaasi ku daraya in maalmihii lasoo dhaafay gudaha Suuqa Bakaaraha ka jireen falalka burcadnimo ee dadka shacabka ah looga dhacayo Mobile-lada gacan qaadka ah.
Dhinaca kale maleeshiyaad katirsan DF-ka ayaa qof shacab ah ku dilay gudaha magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, qofka shacabka ah ayaa lagu dilay meel ku dhow suuqa xoolaha ugu weyn gobolka Hiiraan.
Shacabka ku dhaqan degmada Beledweyne ayaa dhibaatooyin joogta ah kala kulmaya ciidamada DF-ka iyo shisheeyaha Jabuuti iyo Itoobiya ee magaaladaasi xoogga ku jooga.